नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इति र नयाँ आयाम
२३७६ पटक पढिएको
सीताराम घिमिरे ‘सुचारु’
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई केलाएर हेर्दा २००४ सालसम्म फर्कनुपर्ने हुन्छ । ‘जयतु संस्कृतम्’ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यही आन्दोलनका नाममा तत्कालीन समयमा काठमाडौंमा रहेको तीनधारा संस्कृत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पहिलो पटक आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए ।
विद्यार्थीहरूले त्यो बेलामा राणा शासनको चर्को विरोध गरेका थिए । त्यो समयमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत विषयमा मात्र अध्यापन गराउने गरिन्थ्यो । यस प्रकारको शैक्षिक व्यवस्थाको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरूले संस्कृतका साथै इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोलशास्त्र आदि विषयमा पनि अध्ययन गर्न पाउने माग राख्दै आन्दोलन छेडेका थिए ।
त्यसैले पनि “जयतु संस्कृतम्” नै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो प्रयास हो । यही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आजका सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गठन हुँदै आएको छ । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा यो अभियानलाई एउटा कोशेढुङ्गाका रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।
यसैको जगमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना भयो । यो पार्टीको स्थापनासँगै नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन (नेराविफे) को स्थापना भयो । त्यो बेलाका प्रगतिवादी सोच विचार भएका विद्यार्थीहरूको एक समूहले नेराविफेको स्थपना गरेका थिए ।
२००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै यो सङ्गठनले व्यापक विरोध गरेको थियो । २०२२ सालमा यसै सङ्गठनको सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को समेत स्थापना भएको हो । यो संस्थाले आज पनि तमाम विद्यार्थीहरूका हक, अधिकार र आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ ।
त्यति मात्र नभएर नेराविफेले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक समाजवादी आन्दोलनको झण्डा समेत उठाउन सफल भएको थियो । त्यसैले पनि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा यो सङ्गठनको इतिहास गर्व गर्नलायक छ । तथापि आज यो सङ्गठन अस्तित्वमा रहेको छैन । यसका पछाडि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चलेको टुटफुट र एकता जस्ता कारणहरू नै मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेकपामा चलेको टुटफुटको शृङ्खलासँगै नेराविफे नेकपा संयुक्तको निकटतम रहन गयो । त्यसैबाट फुटेर अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को जायजजन्म हुन पुग्यो । नेकपाको पुष्पलाल समूहमा निकट रहेर यो सङ्गठन विद्यार्थीको राजनीतिक गतिविधि गर्दै आइरहेको थियो ।
यो सङ्गठनले प्रगतिवादी विद्यार्थीहरूको विशेष रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले जनवादी शिक्षा प्राप्तिको उद्देश्य राखेर अघि बढिरहेको थियो । यसै सिलसिलामा प्रजातान्त्रिक धारका विद्यार्थीहरूले जनवादी शिक्षा नमान्ने र अनेरास्ववियु कम्युनिष्टहरूको मात्र पेवा भएको भन्ने निष्कर्षसहित प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण राखेर नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन (पछि नेवि सङ्घ) को स्थापना गरे । नेवि सङ्घ आनेरास्ववियुलगायतका तत्कालीन समयमा स्थापना भएका सङ्गठनहरूले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली लगायतका आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसका लागि सलाम ठोक्नै पर्छ ।
त्यस्तै, नेपालको राजनीतिमा आएका विभिन्न उतारचढावको ज्वालामुखीको बीचबाट २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को स्थापना भयो । यसको स्थापनासँगै नेपालमा जनयुद्धको शङ्खघोष गरियो । यही जनयुद्धको बलमा नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने लगायतका उद्देश्य राखी पार्टीको घोषणा गरिएको थियो ।
यो पार्टीले आफ्नो भातृ सङ्गठनका रूपमा २०५३ सालमा अखिल (क्रान्तिकारी) लाई जन्म दियो । यो सङ्गठनको जन्म भएसँगै हजारौँ विद्यार्थीहरू यो सङ्गठनमा आबद्ध भए । कलम, किताब र कपी बोक्ने हातमा बन्दुक बोकेर क्रन्तिको यात्रमा निस्किएका कयौँ यात्रीहरू यात्राबाटै बिलाए । यो सङ्गठनले समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, प्राविधिक, रोजागारमूलक र जनवादी शिक्षा प्राप्तिको उद्देश्य बोकेको थियो ।
यो सङ्गठनले नेपालमा सामन्ती राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्यका लागि योगदान गरेको छ । तथापि नेकपा माओवादीमा भएको विवाद र टुटफुटको कारण यो सङ्गठन पनि क्षतविक्षत भएको छ । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेकपा एमालेबीच भएको पार्टी एकता प्रक्रियासँगै प्रचण्ड निकट आखिल (क्रान्तिकारी) अनेरास्ववियु सङ्गठनमा विलय भई अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
वैद्य र विप्लव निकट रहेका दुई अखिल (क्रान्तिकारी) भने आज पनि क्रान्तिकै मैदानमा लडिरहेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापनासँगै निर्माण गरिएको नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनमा पनि तत्कालीन जनयुद्धको अखिल (क्रान्तिकारी) ठूलो प्रभाव कायम छ ।
यसरी नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दा नेपालका सबै खाले राजनीतिक परिवर्तका लागि अभूतपूर्व योगदान गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म आउने क्रममा विभिन्न कालखण्डमा स्थापना भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भूमिका खेलेकै हुन् । सङ्गठनहरूको यो भूमिकाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको चुली आकाशिँदै गएको पनि सत्य हो ।
विघटनको सङ्घारमा विद्यार्थी राजनीति
तथापि यति विशाल र उच्च विद्यार्थी आन्दोलनको शिखरमाथि चढेर आजको विद्यार्थी राजनीतिलाई हेर्ने हो भने यो विघटनको सङ्घारमा उभिएको देखिन्छ । आजको विद्यार्थी राजनीति र सङ्गठनले विद्यार्थी आन्दोलनको दिशा निर्धारण गर्न सकेन । पुरानै सोचविचार र दृष्टिकोणबाट सङ्गठनहरू सञ्चालित छन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरूको पुरानै कार्यशैली र सङ्गठन निर्माण र बिस्तारका कारण विद्यार्थीहरू नै आजित छन् ।
एउटा आङ्गिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमा कम्तीमा ५ देखि २० वटासम्म विद्यार्थी सङ्गठनहरू सक्रिय रूपबाट आफ्नो राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गर्छन् । क्याम्पसमा नयाँ कक्षा शुरु हुनासाथ सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यार्थीको पढाइलाई अवरोध गर्ने गरी कक्षाकक्षामा सङ्गठन विस्तार गर्ने र कमिटी बनाउने काममा तँछाडमछाड गर्ने गर्दछन् ।
प्रत्येक दिनजस्तो विद्यार्थी सङ्गठनका यस्ता खाले राजनीतिक गतिविधिले विद्यार्थीहरूको हक, अधिकार रक्षा गर्नको साटोमा विद्यार्थीहरूको हक अधिकारमाथि असहयोग गर्ने गरेको छ । यसरी विद्यार्थीहरूको हक र अधिकारका लागि लड्छौँ भन्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विद्यार्थीहरूकै विरुद्धमा गतिविधि गर्नु ठूलो अन्याय र अपराध पनि हो ।
आज विद्यार्थी सङ्गठनको काम गर्ने शैलीमा समयअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । जयतु संस्कृतम्को समयमा जस्तो आज पनि कक्षाकक्षामा गएर विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गरिरहनु कति सान्दर्भिक हुन जाला ।
पछिल्ला दशकमा विज्ञानले विकास गरेको प्रविधि र सञ्चारको माध्यमबाट आज संसारलाई जोड्न र तोड्न पनि सकिन्छ । आजको हाम्रो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नबाट पनि चुकेको देखिन्छ । यो कति दुःखद छ ।
ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूका नेता र विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा आफ्नै माउ पार्टीको मनोरोग लागेको छ । यिनीहरूमा हामी ठूला पार्टीका ठालु सङ्गठनका नेता हौँ भन्ने अहङ्कार छ । अनेरास्ववियु, र नेवि सङ्घ जस्ता राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने सङ्गठनका नेताहरू शैक्षिक व्यापारी, दलाल र माफियाहरूको दलदलमा फसेका छन् ।
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै संयुक्त विज्ञप्ति गर्ने र दलाल, माफिया र शैक्षिक तस्करहरूसँग लाखौँको मोलमोलाइ गर्ने र आम विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई पैसामा किनबेच गर्ने यी सङ्गठनका ठालूहरूको संस्कार नै बसिसकेको छ । विद्यार्थीहरूका हकहितका लागि काम गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थापना भएको विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) पनि यिनै सङ्गठनहरूको अखडा बनिसकेको छ ।
बेलाबखत हुने स्ववियु निर्वाचन यिनीहरूकै हार र जीतको प्रतिष्ठासँग जोडिएर आउने गरेको पाइन्छ । स्ववियु हत्याउनका लागि यी सङ्गठनहरूले ठूलो तामझाम, ताण्डव र भोजभतेरको आयोजना गर्नेदेखि लिएर विद्यार्थीहरूको मतलाई किन्ने र बेच्नेसम्मका हर्कतहरू गर्ने गरेको प्रष्ट छ । यस्तो राजनीतिक प्रतिष्पर्धाको संस्कारले आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई विकास गर्ने भन्दा पनि विनाश गर्दै लगेको छ ।
यतिबेला देशमा चरम शैक्षिक बेरोजगारहरूको सङ्ख्यामा भारी मात्रामा वृद्धि हँुदै आइरहेको छ । दुई खाले शैक्षिक व्यवस्थाको भुमरीमा आज पनि विद्यार्थीहरू छन् । शिक्षामा समानता, व्यावहारिकता र व्यावसायिकताको खाँचो अति नै खट्किएको छ । यतातर्फ विद्यार्थी सङ्ठनको मन गएको देखिँदैन ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै उदासीनताका कारण शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणले विकराल रूप धारण गरिसकेको छ । गरिब र सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उनीहरूको पहँुचभन्दा बाहिर रहेको छ । सरकारी विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ ।
बेरोजगारको पीडामा छट्पटिदै लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने बहानामा बाहिरिन बाध्य छन् । उनीहरू बहिरिएसँगै अरबौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । सो रकम नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको भन्दा ठूलो हिस्सा रहेको विज्ञहरूले समेत बेलाबेलामा बताउने गरेका छन् ।
यस्ता यावत दृश्य र तथ्यहरूले आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर पारी विघटन र विनाशको अशुभ सङ्केत गर्ने काम मात्र नगरेर भोलि समृद्ध नेपाल निमार्णको सपनामाथि समेत तुषारापात गरेको छ ।
यतिबेला औचित्यहीन बन्दै गएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई फेरि नयाँ शिराबाट उठाउन एउटा नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनको छाल हान्दै नयाँ तरङ्गहरू पैदा गर्न आवश्क छ । यही आन्दोलनको नयाँ छाल आजको विद्यार्थी आन्दोलनको अपरिहार्यता हो ।
नेपालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै यो विषयलाई डा. बाबुराम भट्टराईले चलाएको नयाँ राजनीतिक वैचारिक अभियानका बेला विशेष महत्वका साथ उठान गरिएको पनि थियो । तथापि सो राजनीतिक वैचारिक अभियानलाई बिस्तारै नयाँ शक्ति पार्टीका रूपमा स्थान दिएपछि उक्त पार्टीले पनि पुरानै राजनीतिक पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै निरन्तरतालाई पछ्यायो ।
सो अभियानमा जोडिएका युवा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो भगिनी सङ्गठनकै रूपमा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको बिल्ला भिराइदिएपछि यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन । नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन पनि अहिले नामको नयाँमा मात्र सीमित छ । यो विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन ।पुरानै विद्यार्थी सङ्गठनहरूका मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृतिलाई पछ्याइरहेको देख्दा दुःख लाग्छ । यसको मतलब अब यो नयाँ बन्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन ।
आजको विद्यार्थी आन्दोलन असफल र विघटनको दोबाटोमा अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण विद्यार्थी नेतृत्वहरू र सङ्गठनमा देखिएको विचारधारात्मक समस्या नै प्रमुख रूपमा रहेको छ । विचारधारा भन्नाले विद्यार्थी राजनीतिको सम्पूर्णतालाई नै सम्झनु पर्दछ । आजको विद्यार्थी सङ्गठनले लिने विचारधारालाई नयाँ सोचविचारबाट निर्धारण गरी पार्टी सङ्गठनबाट सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्नु पहिलो शर्त रहन जान्छ ।
आजका विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पार्टी कमिटी नेतृत्वबाट स्वतन्त्र बनाएर मात्र यसको विकास र रक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा विद्यार्थी राजनीति सङ्गठन र भूगोलमा आधारित हुनुहँुदैन । यो सङ्गठनलाई भौगोलिक साङ्गठनिक संरचनाबाट विघटन गरी विश्वविद्यालयको संरचना अनुरुप लैजाने हिम्मत सबै सङ्गठनमा रहन सक्नुपर्छ ।
परम्परागत रूपमा एउटा पुरानो मान्यताको अवशेषको रूपमा रहेको स्ववियुलाई तत्काल विघटन गर्नुपर्छ । सबै खाले राजनीतिक धाराप्रवाहबाट सक्रिय रहेका विद्यार्थी र सङ्गठनहरूको साझा मञ्चका रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरी आम विद्यार्थी वर्गको हक, अधिकारको संरक्षक संस्थाका रूपमा खडा गर्नुपर्छ । व्यावहारिक र वैज्ञानिक प्रक्रियाबट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीका रूपमा यसलाई स्थापना गर्ने बहादुरीता अब किन नदेखाउने ?
हिजो स्ववियु जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएको थियो आज त्यसको कोर्ष नै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यही कारण पनि आज स्ववियुको पुनसंरचना आवश्यक छ । आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई औचित्यहीन गराउँदै समाप्त गर्ने खेल धेरै पहिलेदेखि नै भएको हो । त्यो भनेको दुई खाले असमान शिक्षा प्रणाली र शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरण नै हो । त्यसको अन्त्य आजको विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो प्रस्ताव पनि हो र मुख्य मुद्दा पनि हो ।
शिक्षाको व्यापार गर्ने र अकुत कमाउधन्दा गर्ने उद्देश्य अनुरूप नै विदेशी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गराउने नाउँमा व्यापक ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । यसलाई तुरुन्त रोक्ने र प्रतिबन्ध नै लगाउने आन्दोलन छेड्नु आजको विद्यार्थी सङ्गठनको मुख्य दायित्व पनि हो । यही दायित्वलाई हामीले पूरा गरेरमात्र विघटनको भीरबाट झर्नै आँटेको विद्यार्थी आन्दोलनको गाडीलाई नयाँ गन्तव्यमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरू एउटै मञ्चमा बसेर साझा एजेण्डाहरू तयार गरी लडेमात्र आजको विद्यार्थी आन्दोलनले विजय हासिल गर्ने छ । अन्यथा अबको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य नरहन सक्छ ।
(केन्द्रीय उपाध्यक्ष, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन)